Top 5 Free Photo ayeey Software u Mac User in Edit Photos
> Resource > Free > The Best 5 Free Mac Photo Editors u Photo ayeey ee Mac
Waxaa laga yaabaa in aad dooneysid in la abuuro iyo edit sanamyadiinna laakiin ma doonayo in aan bixiyo wax lacag ah. Dhab ahaantii, waxaa jira dad badan tifaftirayaasha sawir Mac free bixiyo laakiin heli kuwa aad u fiican qaar ka mid ah waxay noqon kartaa mid adag. Halkan waxaan ku qor 5 sare oo lacag la'aan ah sawir software tafatirka u Mac si aad tixraac iyo rajaynayaa in aad ku raaxaysan karaan Mac sawir sixiddiisa iyaga la. Isbarbar dhig ah iyo mid ka mid ah oo aad jeceshahay sida ay sawirkaaga baahida tafatirka dooran.
Software tafatirka sawir Bilaashka ah ee Mac 1: The GIMP u Mac OS X
GIMP furan yahay il-editor ah image caan ah Mac OS X iyo waxaa badanaa loo arkaa sida "Photoshop lacag la'aan ah" sababta oo ah interface la mid ah iyo qaababka la Photoshop. Waa software beta ee ay iskaa wax u qabso ah, si software updates iyo xasilooni laga yaabaa in dhibaato ah. Laakiin dadka isticmaala badan oo ka tarjumaya in software yimaado iyada oo aan dhibaato weyn oo ay ku raaxaystaan ​​waxaa la isticmaalayo. Fadlan la soco in GIMP waa la jaan qaada Mac OS X ama ka dib.
Sawir software tafatirka Bilaashka ah ee Mac 2: xeebteeda
Xeebteeda waa editor ah isha sawir u furan qunbuhu oo ku salaysan yahay ku dhawaad ​​GIMP ee technology. Waxa uu isticmaalaa qaabka file la mid ah sida GIMP, laakiin waxaa la soo saaray sida codsi Mac OS X. Sameeysa ayaa sheegay in ay kasoo muuqday gradients, qaabab iyo stroke qoraalka iyo burush anti-aliase. Ka sokow, waxa ay taageertaa layers badan iyo Alfa channel tafatirka.
Sawir software tafatirka Bilaashka ah ee Mac 3: Chocoflop
Chocoflop waa editor sawir kale oo weyn oo lacag la'aan ah Mac. Waa bilaash, laakiin weli waa ka yar horumarinta. Muuqaaladan weyn ee editor bilaash ah Mac sawir waa in aan burbur, qoraalka hodan kartaan, sida diirada image asaasiga ah, taageero cayriin, iwm halka edit sawiro. Dadka marmar ma ku tafatir sawir, waxaa laga yaabaa in ay adag tahay in la isticmaalo. Waxaa kale oo u nixin ah in ay hadda ma taageeri Snow Leopard.
Sawir software tafatirka Bilaashka ah ee Mac 4: Pixen
Pixen waa editor naqshadeynta lacag la'aan ah Mac OS X oo waa mid aad u wanaagsan animation iyo tafatirka ku salaysan pixel. Muuqaalada ay ka mid layers awood, aragtida horyaalka, muuqaalada animation, iwm
Sawir software tafatirka Bilaashka ah ee Mac 5: Picasa
Picasa u adeegtaa sida editor ugu fiican sawir, siladda sawir, tababaraha sawir iyo qaybsiga sawir qalab. Waxaa aad u saamaxaaya in ay tirtiraan xagashada iyo ceebaalowyo, hagaajin red-indhaha, dalagga oo dheeraad ah, u jeedi photos galay filimada, collages, duubey oo dheeraad ah. Ka dib markii in, waxaad gali kartaa in aad sawiro retouched in Picasa Web Qaasaali si ay u wadaagaan qoyska iyo saaxiibada.
By jidkii, haddii aad leedahay sawiro aad u badan, waxa aad sameyn kartaa slideshow photo la software slideshow sawir iyo slideshow gubaa si DVD ilaalinta muddo dheer. Isticmaal Hababka filimka inuu ka soo leexdo sawiro aad u Hollywood sida filimada isla! Ama waxaad samayn kartaa sawrirrada ah digital la software sawrirrada si ay u sameeyaan buug xasuus ah.